IMEI Number ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ? – DigitalTimes.com.mm
IMEI Number ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ကိုယ့်မှာစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ IMEI နံပါတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နားယဉ်နေမှာပါ။ IMEI နံပါတ်က ကိုယ်ထင်ထားတာထက်ကိုပိုအရေးကြီးတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုပါ။
ဒါဆို IMEI Number ဆိုတာဘာလဲ?
IMEI ဆိုတာက International Mobile Equipment Identity ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး လုံးဝမတူနိုင်တဲ့ ID နံပါတ်တစ်ခုပါ။ အရင်က အင်တာနက်ကနေ လဲတာဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖူးရင် IMEI နံပါတ်တောင်းတာကို သိမှာပါ။
IMEI နံပါတ်မှာ ဂဏန်း၁၄လုံးပါပြီး နောက်ဆုံးမှာဂဏန်း၁လုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဗားရှင်းမှာလည်း ဂဏန်း ၁၆လုံးပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ကိုတော့ IMEISV လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ?
ဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုရှာဖို့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ အများဆုံးသုံးတာက USSD ကုဒ်ကိုသုံးပြီးရှာတာပါ။ dialer app ကို ဖွင့်ပြီး *#06#* ကိုခေါ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာဂဏန်းတွေပေါ်လာမှာပါ။
နောက်တစ်နည်းက ဖုန်းရဲ့ About section မှာ Status ကိုနှိပ်ပြီး IMEI information မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ဘူးခွံမှာလည်း IMEI နံပါတ်ကိုရှာလို့ရသလို ဘက်ထရီဖြုတ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီအောက် စတစ်ကာပေါ်မှာ IMEI နံပါတ်ကို နှိပ်ပေးထားပါတယ်။
IMEI နံပါတ်တွေက ဖုန်းထဲမှာ ကုဒ်သွင်းထားတာဖြစ်လို့ ပြောင်းလို့လုံးဝမရပါဘူး။ ဖုန်းက ဆင်းမ်ကဒ်၁ကဒ်ပဲဆိုရင် IMEI နံပါတ်၁ခု, dual-SIM ဆိုရင် IMEI နံပါတ် ၂ခုတွေ့ရမှာပါ။
ဖုန်းထဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆင်းမ်ကဒ်ထည့်လိုက်ချိန်မှာပဲ network provider က နံပါတ်ကိုဖတ်ပြီး service စပေးပါတယ်။ SIM နံပါတ်နဲ့ IMEI နံပါတ်နဲ့လည်း မတူပါဘူး။
ဘာကြောင့် IMEI နံပါတ်တွေက အရေးကြီးတာလဲ?
ကိုယ့်ရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုချရေးပြီး လုံခြုံတဲ့တစ်နေရာမှာသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင် network provider ဆီဆက်သွယ်ပြီး service ပိတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဖုန်းက ဘာ network ကိုမှချိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲ သုံးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ဖုန်းခိုးခံရတယ်ဆိုရင်တောင် IMEI နံပါတ်ကိုပြောပြီး service ပိတ်ခိုင်းလိုက်ရင် အိုကေပါပြီ။ ဘာလို့အရေးကြီးသလဲဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းခိုးခံရတာဖြစ်ဖြစ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် IMEI နံပါတ်ကိုမှတ်မိရင် network operator တွေကနေ အမြန်ခြေရာခံနိုင်လို့ပါ။
Blacklist လုပ်ခံထားရပြီးပြီလားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ (အထူးသဖြင့် second-hand ပြန်ဝယ်တဲ့သူတွေသတိထားဖို့) ဆိုဒ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ imei.info မှာဝင်ပြီးနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှအချက်အလက်တွေကျလာမှာဖြစ်ပြီး blacklist လုပ်ခံထားရတဲ့ဖုန်းလား ခိုးရာပါဖုန်းလားစစ်နိုင်ပါပြီ။
Google Drive ဆီ App Data တွေ အော်တို Backup လုပ်နည်း
Google က AI ပါတဲ့ Clips Camera ကို ရောင်းချ